आर्थिक सशक्तीकरण र स्थानीय निकाय - Karobar National Economic Daily
आर्थिक सशक्तीकरण र स्थानीय निकाय
query_builderAugust 11, 2017 8:53 AM supervisor_accountप्रा.डा. कमलराज ढुंगेल visibility561
चालू आर्थिक वर्षको बजेटले स्थानीय तहको विकासका लागि रकम विनियोजन गरेको छ । यसले स्थानीय तहका छायामा परेका (सम्भावना भएका तर स्रोत र साधनको अभावमा विकास हुन नसकेका) विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनका निमित बाटो खुलाएको छ ।
साना–साना सिँचाइ आयोजना, स्थानीय तहका बाटाघाटा, कच्चापदार्थको उपलब्धताका आधारमा घरेलु उद्योगको विकास, बजार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी, बैंकिङ सुविधामा पहुँच, सञ्चार सुविधा आदि विकास कार्यलाई आवश्यकताअनुसार प्राथमितामा पारी विनियोजित रकमको सदुपयोग गर्नु–गराउनुपर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा थपिएको छ ।
विवेकशील ढंगले यो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा यी कार्यले प्रत्येक स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपले स्वावलम्बन गराउनेतर्फ उन्मुख गराउन सक्नेछ । एकातिर ग्रामीण इलाकामा लुकेर रहेको सम्भावित स्रोतले विकास हुने मौका पाउँछ भने अर्कातिर स्थानीयवासीलाई उनीहरूको क्षमताअनुसार रोजगारी प्रदान गर्छ ।
केही हदमा स्थानीय तहमै रोजीरोटी उपलब्ध हुन्छ । खुसीको कुरा हो, सबै स्थानीय तहको विकास प्रतिस्पर्धी हुँदा समग्र मुलुकलाई नै स्वावलम्बनको मार्गतिर अग्रसर गराउँछ ।
स्थानीय निकायलाई वर्तमान सविधानले आर्थिक सशक्तीकरण गरेको छ । विकास कार्यका लागि केन्द्रबाट स्रोत सीधै स्थानीय निकायमा जाने प्रावधान छ । स्थानीय निकाय आफंैले पनि सम्भाव्यता हेरी स्रोत संकलन गर्न सक्छ ।
स्रोतसाधनको अभावले स्थानीय तहमा रहेका तर उपयोगमा आउन नसकेका स्रोतको विकासमा स्थानीय तहमा नै निर्णय गरी संकलित रकमको परिचालन गरी तिनीहरूको विकास गर्न सकिन्छ । यो कार्यले एकातिर स्थानीय तहमा रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भने अर्कातिर स्थानीयवासीको आम्दानीमा वृद्धि गराउँछ ।
सामाजिक कार्यहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार आदिमा स्थानीयवासीलाई पहुँच बढाउनका निमित पहल गरी विकास गर्ने अधिकार स्थानीय निकायमा सुरक्षित गरेको छ । यसले मानव संसाधनको विकासमा अहम भूमिका खेल्न सक्छ ।
विकासका लागि स्रोतको संकलन र परिचालन गर्ने निर्णय गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई अधिकार दिएको छ । यो अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय निकायका बासिन्दाहरूले आफ्नो भाग्य आफैं बनाउन सक्नेछन् भन्ने कुरामा शंका गर्ने ठाउँ छैन ।
नेपाली जनताले झन्डै दुई दशक लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू पाउन सकिरहेका थिएनन् भने यसको अभावमा संघीयतामा आधारित नेपालको संविधानले पनि नेपाली धर्तीमा पाइला टेक्न पाएको थिएन ।
स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न मुलुक अगाडि बढिरहेको छ । सात प्रदेशमा एक प्रदेशबाहेक बाँकी प्रदेशमा चुनाव सम्पन्न भई स्थानीय बासिन्दाले जनप्रतिनिधिहरू पाइसकेका छन् ।
यसले संविधानलाई पनि कार्यान्वयनमा लगेको छ । जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा स्थानीय निकायमा उपलब्ध स्रोतसाधनको विवेकशील ढंगले परिचालित भई विकास हुन्छ भन्ने कुराले चर्चा–परिचर्चा प्राथमिकताका साथ पाइरहेको छ । विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विभिन्न कार्य गर्छौं भनी प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
यही प्रतिबद्धताका आधारमा विभिन्न दलका नेताहरूलाई देशका नागरिकहरूले भोट दिएर जनप्रतिनिधिहरू छानेका छन् । आआफ्नो स्थानको विकास कसरी गराउने र समग्र देशलाई नै कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने कुराको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूले बोकिरहेका छन् ।
त्यसैले कुनै पनि स्थानीय तहको विकास उक्त स्थानीय तहका राजनीतिज्ञ, सामाजिक कर्यकर्ता, सहजकर्ता, विशेषज्ञ र बुद्धिजीवीहरू अझ एक शब्दमा भन्ने हो भने नागरिक समाजको कार्यशैली र तौरतरिकामा निर्भर रहन्छ ।
यो अधिकारलाई सही बाटोमा हिँडाउन अझ महŒवपूर्ण पक्ष के हो भने सही र सरल आर्थिक नियमहरूको अहम् भूमिका रहेको हुन्छ । यसले आर्थिक विचलन हुनबाट बचाउँछ । यसले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्रोत विकास कार्यमा विवेकशील ढंगले परिचालन गर्न सहयोग पु¥याउने मात्र होइन, लगामकै रूपमा कार्य गर्छ ।
विप्रेषण र यसको परिचालन
नेपालको आफ्नैपन छ, मागी खाने । नेपालीहरूका पाखुरीहरू दरा छन् । यति हुँदाहुँदै पनि किन हामी मागी खान बाध्य छौं ? उत्तर कसैले दिँदैन । उत्तर दिनु पनि कसरी ? गरी खानभन्दा मागी खान सजिलो छ ।
यही अवस्थाको उपज होला, अनगिन्ती दह्रा हातपाखुरीले देशभित्र नाच्न पाइरहेका छैनन् । नाचिरहेका छन् केवल विदेशी भूमिमा । यिनै पाखुरीहरूको उपजले नेपालीहरूलाई आर्थिक न्यानोपनको अनुभव गराइरहेको छ । किन यो न्यानोपन नहोस्, विदेशबाट आएको रकमले एक गाँस खान र एउटा झुम्रो लगाउन सहज भएको छ । तर, यो न्यानोपन कतिन्जेल रहने हो प्रश्न उठ्न सक्छ ।
यसले दीर्घकालसम्मका लागि आर्थिक तबरले न्यानोपन नदिन सक्छ । यो क्षणिक वा अल्पकालीन हुन सक्छ । फेरि कष्टकर दिनहरूको पुनरावृत्ति हुन सक्छ । नेपालको कुल आम्दानीको ३० प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ । यति फराकिलो रकम बर्सेनि भित्रिरहँदा पनि फेरि नेपाल किन संसारको मानचित्रमा निर्धनतम मुलुकका रूपमा रहिरहेको छ ?
दिगो रूपले पाइलाहरू टेकाउने ठाउको नेपालमा अभाव छैन । तर, ती पाइलाहरू टेक्ने ठाउँमा काँडाका झाङहरू तेर्सिएका छन् । विप्रेषण आउँछ, थोरै होइन धेरै । तर, खर्च हुने गर्छ अनुत्पादक क्षेत्रमा । यो विप्रेषणको हिस्सा प्रत्येक स्थानीय निकायमा छरिएर रहेको छ । ग्रामीणवासीहरूले यसको मुख्य भाग उपभोगमा खर्च गरिरहेका छन्, बचत हुँदैन । बचत नभएपछि लगानी नहुनु कुनै अनौठो होइन ।
गाउँगाउँमा बर्सेनि भित्रिने विप्रेषणको १० प्रतिशत मात्र गाउँमा सम्भाव्य भएका उत्पादन कार्यमा लगाउने वातावरण बनाउन सक्दा गाउँका युवायुवतीहरूले गाउँमै आय आर्जन गर्ने रोजगारी पाउन सक्दछन् । यो कार्यले भविष्यका किशोरकिशोरीहरूले कामको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने बाध्यताबाट केही हदमा मुक्त गराउन सक्ने थियो ।
जनप्रतिनिधिहरूको कार्यशैली, चिन्तन, मनन, आँट, जाँगर, विकासमुखी भावना र चुनावमा उनीहरूले जनतासामु गरेका प्रतिबद्धतामा इमानदारी आदिमा स्थानीय निकायको समग्र विकास निर्भर रहन्छ । तर, उनीहरूका तौरतरिका र कामगराइ अनि उनीहरूले गरेका निर्णयहरूले उनीहरूका प्रतिबद्धताभन्दा फरक ढंगले प्रस्तुत हुन थालेको महसुस भोटरहरूले गर्न थालेका छन् ।
उनीहरूका निर्णय हेर्दा पहिलो गाँसमै ढुंगो लाग्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ । सवारी सुविधा (दुई वा चारपाङ्ग्रे), तलब, भत्ता, मोबाइल फोन, बैठक भत्ता, भ्रमणभत्ता, विभिन्न तरिकाका सुविधा (पानी, बत्ती, इन्टरनेट, टेलिफोन, पत्रपत्रिका आदि) बढाउने वा निर्धारण गर्नेमा केन्द्रित भएका छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, त्यो पनि आफ्नै लागि । यसले उनीहरूका प्रतिबद्धतालाई कतै छायामा त पारिरहेको छैन ?
हुन त यो समान्यभन्दा सामान्य कुरा हो । सुविधाले मानिसको कार्यक्षमता बढाउँछ । तर, विकास कार्यका लागि विनियोजित रकम यसतर्फ वितरणमुखी हुँदा विकासले गति लिन सक्छ कि सक्दैन प्रश्न उठ्न सक्छ । अझ यसले शंका उब्जाउँछ । स्थानीय तहको विकासका लागि विनियोजित रकम जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा सीमित हुने त होइन ?
यस प्रकारका क्रियाकलापले जनताका विद्यमान समस्याहरू यथावत् रहने मात्र होइन, अझ मौलाउन सक्छन् । देशको सीमित स्रोत र साधनको उपयोग जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा प्रयोग गर्ने हो भने देशका बासिन्दाहरूका जल्दाबल्दा रोजीरोटीका सवालहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन । देश विकासले गति लिन सक्दैन । नेपालमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको भागमा गरिबी छ ।
यो जनसंख्याको भागमा नागरिकतााको सिफारिसका निमित धेरै रुपैयाँ तिर्न सक्ने क्षमता हुँदैन । यो स्रोत जुटाउनका निमित उनीहरूले या त ऋण काढ्नुपर्छ या सम्पत्तिको बेचबिखन । यस प्रकारका निर्णयले जनतालाई राहत होइन, आहत बनाउँछ । त्यसकारण कुनै पनि कर लगाउँदा जनताको तिर्न सक्ने क्षमताको अध्ययन गरेर मात्र लगाउन मनासिब हुन्छ ।
नेपालका कुनाकाप्चाको विकासका लागि संघीयताले निश्चय नै सहज बनाएको छ । विकास कार्यका निम्ति स्थानीय निकायलाई स्रोतसाधनले सशक्तीकरण गरेको छ । ग्रामीण इलाकामा सञ्चालन हुन सक्ने सानातिना आयोजनाहरूको विकासका निमित्त स्थानीय तहमै ढोका खुलेको छ । नीतिनिर्मातादेखि निर्णयकर्ताका साथै कार्यकारी अधिकार सबै स्थानीय तहमा निहित छ ।
यो अधिकारलाई मौकामा बदलेर सबै स्थानीय निकायले विकास आयोजनाहरूको थालनी गर्दा देशले काँचुली फेर्न सक्छ । यो कार्यलाई अगाडि बढाउनका निमित्त प्रत्येक स्थानीय निकायमा कुन आयोजना सञ्चालन गर्ने गराउने भन्ने निर्णय लिनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नु गराउनुपर्छ ।
सम्भाव्यता अध्ययनबिना सीमित स्रोत र साधनको परिचालन भयो भने दिगोपना हुन सक्दैन । त्यसैले सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भावित आयोजनाहरूको इन्भेन्टोरी तयार गरेर तिनीहरूको नाफा नोक्सानसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गर्नु–गराउनुपर्छ । बढी लाभदायक र दिगोपन हुने आयोजना छनोट गर्न यसले मद्दत पु¥याउँछ ।